SomaliaReport: Sarkaal Sare Al-Shabaab ah Lagu Xiray Yugaandha
"Ninkan waxaa suurta galisay in la qabto caawimaada Soomaalida, oo aan anigu ka mid ahay, waxaana idiin sheegayaa inuu Kampala joogay mudo bil ah. Waxaan isaga dhowrgoor ku arkay Soomaaliya, gaar ahaan Suuqa Bakaaraha," waxaa yiri il war oo aan dooneyn in la magacaabo si aanay al-Shabaab uga aargoosan.
Waxay iluhu sheegeen in Jibriil Axmed Diiriye uu mudo bil ah ku sugnaa gobolka Galgala ee Puntland ka dibna kasoo duulay gagida dayuuradaha Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee Soomaaliya ka dibna soo galay Yugaandha.
"Waxaan xasuustay inaan ku argay Gaalkacyo mudo hore. Markaa ma awoodin inaan boliiska Gaalkacyo usheego waayo waxaan ucabasaday nabadgalyadeyda," Soomaali Kampala ku sugan ayaa yiri.
Bishii July 2010, Yugaandha oo ah xooga ugu badan ee ciidamada nabad illlaalinta Afrikaanka ee jooga Soomaaliya, ayaa al-Shabaab la beegsaday labo qarax oo ku nafwaayeen 74 ruux 70 kalena ku dhaawacmeen.
Saraakiisha nabadsugida Yugaandhan xiligan diyaar uma ahayn warbixin dheeraad ah.